Izici zokuphulukisa ze-mandarin kushukela > Ukudla ngesifo sikashukela
Kungenzeka yini ukuthinta abantu abanesifo sikashukela?
Lapho i-insulin ye-hormone inganele emzimbeni noma ingasetshenziswa kahle, ama-carbohydrate ayeka ukumunwa. Ushukela omningi awubandakanywa ekudleni, kepha umane nje udonswa egazini nasemchameni, lapho ubhubhisa khona imithambo yegazi nezicubu. Isifo sikashukela i-mellitus yisifo esiyingozi esenzeka engxenyeni yesibili yokuphila. Ochwepheshe bathi izimbangela eziphambili zalesi sifo yiminyaka futhi ikhuluphele.
AmaMandarin wohlobo 2 lwesifo sikashukela kuthiwa ayasetshenziswa, athonsa umzimba, awugcwalisa ngamavithamini. Inkambo yesifo sikashukela incike kakhulu endleleni yokuphila nasekuziphatheni kwesiguli. Ngokuvamile kuvunyelwe ukulawula isimo futhi sigcine izinga likashukela lijwayelekile ngosizo lokwelashwa kokudla kanye nokuzivocavoca umzimba okujwayelekile ngaphansi kokuqondisa udokotela. Inani elilinganiselwe lama-mandarin kwisifo sikashukela lisiza ukulwa nesifo esibi, okubaluleke kakhulu, lingasidluli ngenani. Umthamo onconywe odokotela uyizithelo ezimbalwa ezinkulu ngosuku.
Imithetho yokusetshenziswa kwama-mandarin kushukela
I-Fructose equkethwe epulini le-tangerine idonswa kalula. Ukudla nge-fiber mandarin kuvimbela ukumuncwa kweglucose.
Inani nsuku zonke tangerines - ambalwa izithelo. Ukudla izithelo ezimnandi kufanele kube ngokulinganiselayo kwabanesifo sikashukela.
Izinto ezizuzisayo kakhulu zitholakala ezithelo ezintsha.
Ijusi leMandarin liqukethe cishe akukho fayibha, elehlisa izinga lokuqhekeka kweshukela. Esikhathini sikashukela, kungcono ukungaphuzi ujusi we-tangerine, kepha ukudla izingxenye ezithile ze-tangerine.
Ama-compotes nokulondolozwa kugcwele ushukela, ophikisana nesifo sikashukela. Kuliqiniso, ungapheka ijamu ekhethekile ngaphandle koshukela noma ukufaka esikhundleni, kepha kusazoqhubeka kungabi namavithamini awusizo afa ngesikhathi sokushisa komkhiqizo.
Lapho ubheka ukuthi kungenzeka yini ukuba nama-tangerines kushukela, cabanga ngengozi yokungezwani komzimba. Izithelo zeCitrus zivame ukungezwani komzimba.. Ngaphambi kokusetshenziswa, hlola impendulo yomzimba kuma-tangerine.
Kwabanesifo sikashukela, kubaluleke kakhulu ukugcina ukungavikeleki komzimba. AmaMandarins esifo sikashukela azosiza ekuqiniseni umqobo ovikela imvelo, obaluleke kakhulu kwisifo sikashukela. Ukutheleleka okungena emzimbeni wesifo esibuthakathaka kungadala ingozi enkulu.
I-Tangerine peels yesifo sikashukela
Kwenzeka kaningi ukuthi ukuhlanzwa kuqukethe izinto ezibaluleke kakhulu kunezithelo uqobo. Ngesikhumba sama-tangerines, lokhu kuyafana. Wonke umuntu ukhumbula ukuthi ama-tangerines amnandi kanjani, futhi ngephunga elithambile kutholakala izithambeka.
Uma wenza i-decoction yokuhlanza okungadingekile noma engeza i-tangerine zest etiyeni, khona-ke iphunga lomlingo kanye nezindawo zokuphulukisa zezithelo zaseningizimu zizongena emzimbeni ngokwakhiwa okuphelele.
I-peel enamakha, okulula ukuyihlanza isetshenziselwa ukwelapha izifo ezahlukahlukene.
Izici ezi-8 ezizuzisayo ze-tangerine ikhasi:
I-peel iqukethe inani elikhulu lama-antioxidants. Kunokuningi okuningi kwawo emaxekeni kunasenkingeni yejusi entsha. Ama-antioxidants avimbela ukuguqulwa kweseli, ukuvikela umdlavuza wesikhumba, i-ovary, ibele, i-prostate.
Itiye lase-Mandarin zest licebile ngama-flavon we-polymethoxylated, anciphisa i-cholesterol aze afike ku-40% futhi anciphise kakhulu ushukela.
I-Zest yenza kusebenze izinqubo zokugaya ukudla, iqeda ukuqothuka, iqinise amasosha omzimba futhi iphinde ihlukumeze.
Isiphuzo esinephunga elimnandi esenziwe e-peins tangerine eyenziwe eqabula sisusa isicanucanu, siyeke ukugabha.
Amafutha abalulekile avela ku-peel ngokuhambisana nomphumela okhuthazayo wombala welanga wezithelo unciphisa izimpawu zokuphazamiseka kwemizwa. Yidla izithelo ezivuthiwe nge-peel noma uphuze itiye elimnandi nge-zest. Umuzwa wokukhathazeka, ukukhathala nokucindezela ngokweqile kuzokushiya.
Ngomkhuhlane, oyingozi ikakhulukazi kwabanesifo sikashukela, ukumiselwa kwamakhasi we-mandarin kuyasiza. Isusa ngempumelelo umsamo emgudwini wokuphefumula, yandisa isithiyo esivikela umzimba.
I-peel iqukethe izinto ezicindezela umsebenzi obalulekile wama-bacteria we-Helicobacter pylori abangela i-peptic ulcer. Phuza itiye le-zest ukuvikela izilonda.
Ingxenye emhlophe yamakhreyithi iqukethe i-izidakamizwa i-nobiletin, esiza nokususa amanoni emafutheni emisipha nasemithanjeni yegazi. Ukulahlekelwa isisindo ngosizo lwamathanga we-tangerine, ulwa kanzima nokubonakaliswa kwesifo sikashukela.
I-Decoction ye-tangerine peels yesifo sikashukela
Peel 3-4 tangerines epanini elinelitha lamanzi. Ngemuva kokubilisa, sinciphise ukushisa kube kancani bese kumnyama okuphakathi esitofini ihora. Akufanele ukhiphe amakhasi noma ukuhlunga umhluzi. Vele ubeke isitsha esiqandisini, bese uphuza umhluzi amahlumela ambalwa ngasikhathi.
I-Tangerine pulp diabetesic jam ene-zest
Thatha ama-tangerine amahlanu aphakathi nendawo, uwahlabe bese uwahlukanisa ube ngamaqhezu. Bilisa isithelo emanzini amancane imizuzu eyi-15. Faka isipuni sejusi kalamula esisanda kufakwa nesipuni se-tangerine zest. Thuthukisa ukunambitheka nephunga le-jam nge-pinch yesinamoni ne-sweetener, uma uthanda. Gcina ingxube ngomlilo imizuzu embalwa bese uziphoqa wedwa. Yidla ujamu obandisiwe, ungabi ngaphezu kwezipuni ezi-3 ngasikhathi sinye, futhi ujabulele isiphuzo esimnandi nesinempilo.
Tangerines amasaladi nge zest entsha
Noma yiziphi izaladi zezithelo ezivela ezithelo ezingamnandi kakhulu nangamajikijolo zingatholwa ngesipuni sethanga elisanda kufakwa le-tangerine. Iphunga lezithelo zaseningizimu lizokwengeza okuvamile kunoma yisiphi isidlo. Esikhathini sikashukela, kubalulekile ukukhipha amasaladi ngezithako ezingekho ngamafutha nezingavuthiwe. I-nonfat kefir noma iyogathi yemvelo ngaphandle kwezengezo ilungele lezi zinhloso.
Ungadla kanjani nesifo sikashukela sohlobo 2
Akunandaba ukuthi isithelo sisiza kangakanani, izimfanelo zaso ezibalulekile ngeke zisize ekwelapheni ukwephula imithetho yokudla okudingekayo sikashukela.
Isidingo esiyinhloko ekudleni kwesifo sikashukela ukuhlukaniswa kokudla okunempilo. Isikhathi sokudla phakathi kwezidlo asikho ngaphansi kwama-3, kodwa hhayi ngaphezu kwamahora we-4,5. Ukwehlukaniswa okunjalo kukuvumela ukuba ulondoloze izinga loshukela njalo, kuqeda ukugxuma okungazelelwe kulelo zinga nokuhlaselwa kwe-hypoglycemia.
Isidlo sasekuseni sokuqala siyikota yokudla nsuku zonke amakhalori. Isikhathi esifanele kunazo zonke sokuqokwa kuqala ekuseni, ngokushesha nje ngemuva kokuvuka. Ukwakha imizwa yenjabulo nokuqhuma kwamandla ekuseni, kubalulekile ukusebenzisa i-mandarin eyodwa.
Ngemuva kwamahora amathathu, kulandela isidlo sasekuseni sesibili. Lesi sidlo sifaka i-15% yenani eliphelele lekhalori yansuku zonke. Esikhundleni setiye, phuza umhluzi we-tangerine noma itiye kusuka ku-tangerine zest.
Isidlo sasemini sivame ukuhlelwa ngamahora ayi-13, amahora amathathu ngemuva kwasemini. Isidlo sasemini yisidlo esidonsa kakhulu. Okuqukethwe kwekhalori kwalesi sidlo kungama-30%.
Phakathi kokudla kwasemini nesidlo sasebusuku, ukudla okulula okuhleliwe kuhlelekile. IMandarin esihlathini sasemini iyasiza kakhulu.
Ukudla kwakusihlwa emahoreni ayi-19 kwenza ama-20% wamakhalori aphelele.
Ngaphambi kokulala, kuhle ukuphuza i-decoction of peels tangerine, itiye elinomandara zest noma udle izithelo eyodwa.
Izinzuzo zezempilo zabanesifo sikashukela
Ucwaningo oluningi selukhombisile ukuthi ama-tangerine ayingozi kulabo abadinga njalo ukuqapha ukugcwala kweglucose egazini. I-Flavonol nobiletin equkethwe izithelo ithinta amazinga e-insulin futhi ikhipha ne-cholesterol embi. Isifo sikashukela, ama-tangerines athinta isifiso sokudla, ahlinzeke isiguli ngemithambo yamafutha omzimba futhi athuthukise ukugaya.
Kubalulekile ukuthi iziguli ezinesifo sikashukela zilondoloze ukungatheleleki, ziqaphe isimo sazo zonke izitho nezinhlelo, ngoba ukusheshe kweqa ushukela wegazi kuthinte imithambo yegazi, kwenza umsebenzi wazo usebenze emzimbeni wonke. Ama-Tangerines asiza ukubuyisela impilo:
Aqukethe i-Vitamin C nje kuphela, okuyindabuko yezithelo eziningi zikawolintshi, kepha futhi namafutha abalulekile, uvithamini K, B2, B1, D, obaluleke kakhulu ebusika lapho umzimba ulahlekelwe yilanga. Noma kugcinwa isikhathi eside, ama-tangerine agcina wonke amavithamini awo athuthukisa ukusebenza kwesistimu ye-vascular, ethinteka kakhulu ekuphazamisekeni kwama-pancreas.
Ama-tangerines acebile ngosawoti wamaminerali kanye nama-pectin. ICitric acid kuma-tangerine isusa izakhi eziyingozi nama-nitrate kumaseli. Lokhu kubalulekile ikakhulukazi kwabashukela asebekhulile.
Izici ze-antiseptic zama-mandarins zaziwa isikhathi eside. I-pulp nejusi walezi zithelo kunciphisa ukuvuvukala, okubalulekile phambi kwezilonda zesikhumba kushukela.
Ngenxa yama-tangerines, umsebenzi wenhliziyo uyathuthuka, ukunqwabelana kwama-cholesterol plaque, okuholela ku-pathologies engathí sina, ngokwesibonelo, i-vasher atherosclerosis kanye nemivimbo, kuvinjelwe. Kungcono ukungabuki i-mesh emhlophe kuma-tangerine. Ama-glucosides afakelwe kuwo, aqinisa umzimba kusuka ngaphakathi.
Ijusi kanye ne-tangerine pulp kuqeda ukoma ngokuphelele futhi kuthathe indawo yama-dessert amnandi, anqatshelwe isifo sikashukela.
Amafutha ama-Mandarin abalulekile ayindlela enhle yokulwa nokuxineka kanye nesimo esibi somoya.
Ama-phytoncides aqukethe ama-mandarin abuyisa umgudu wokugaya ukudla, asiza ukulwa nokuxineka kolwelwesi lwe-mucous emlonyeni noma ezizitho zangasese, ezivame ukuhambisana nesifo sikashukela.
I-Amino acid synephrine inomphumela omuhle ohlelweni lokuphefumula, isiza ukubhekana nesifo somoya (i-asthma ne-bronchitis), ikhipha ukuvuvukala futhi inomphumela olindelekile.
Ukusetshenziswa okufanele kwama-mandarin kwesifo sikashukela
Ama-tangerines amasha avuthiwe azosiza kunoma yiluphi uhlobo lwesifo sikashukela, kufaka phakathi ukuthinta umzimba. Izithelo ngeke zilimaze impilo uma zidliwa ngokulingana. Ziqukethe ushukela ngendlela ye-fructose, ebanikeza ukunambitheka okumnandi. Iyangenwa kalula futhi ayinqwabelani egazini, engabangeli ukuhlaselwa okubukhali kwe-hypoglycemia. AmaMandarins aphansi kilojoule, ngakho-ke ngesifo sikashukela sohlobo 2, esivame ukubangelwa ukukhuluphala kanye nokudla okunempilo komzimba, aphephile.
Ama-tangerine ambalwa ngosuku anda ukumelana nazo zonke izinhlobo zezifo, okubalulekile ezifweni ezibangelwa ukuphazamiseka kwe-metabolic. Ibhonasi eyengeziwe yabanesifo sikashukela ukuthi izithelo ezisawolintshi zisusa uketshezi oluningi kwezicubu, zivimbele umfutho wegazi ophakeme kanye nokuvuvukala.
Onesifo sikashukela, awukwazi ukusebenzisa kabi ama-tangerines. Lokhu kungumkhiqizo oqinile we-allergenic, ovame ukudala i-diathesis ngisho nakubantu abaphilile. Kungcono ukudla izithelo ezintsha ezingaphekiwe, esikhundleni sesidlo sasemini noma isidlo sasekuseni esinenhliziyo.
Ama-tangerines ahleliwe aqukethe ushukela omningi, ongavikelekile kwabanesifo sikashukela. Okufanayo kusebenza kuyitolo ye-tangerine ethengiwe. Alunayo i-fiber, evimbela umphumela we-glucose, ngakho-ke kungcono ukwenqena ukuyisebenzisa kwabanesifo sikashukela.
Ngesifo sikashukela, i-decoction enempilo ye-tangerine ikhasi isizisunguzile uqobo. Ilungiselele kanjena:
Cwecwa i-tangerine evela ezingubeni.
Geza ikhasi bese uligcwalisa ngamanzi epanini.
Izikhumba kufanele zibilise futhi zibilise imizuzu eyi-10.
I-decoction yezikhumba ze-tangerine idliwa nsuku zonke, ngaphandle kokuhlunga, ngemuva kokupholisa.
I-decoction ye-tangerine peels igcina umzimba ngezinto ezidingekayo zokulandela umkhondo kanye namavithamini anomthelela ekujwayekeni kwe-metabolism kushukela. Ingilazi ephelele yomhluzi iboniswa nsuku zonke; kunconywa ukuyigcina esiqandisini.
Tangerines ngokumelene nesifo sikashukela nokudangala (ividiyo)
AmaMandarins - izithelo ezisawolintshi, ziwusizo kakhulu kunoma yiluphi uhlobo lwesifo sikashukela. Funda kabanzi ngezakhi zokwelapha zalezi zithelo kusukela kuvidiyo.
Ama-Tangerines kanye ne-peel yawo anciphisa ukucindezelwa, okubalulekile kwisifo sikashukela sesibili. Basiza ngekhanda, banciphise umfutho wegazi, basuse i-cholesterol eyingozi futhi bathinte amaseli e-pancreatic, bawenze umsebenzi wabo bawenze, futhi bathuthukise nezinqubo ze-metabolic. Sebenzisa izithelo ezinjalo ezimnandi ngokuqapha, ikakhulukazi ngesifo sikashukela sohlobo 1, lapho imijovo ye-insulin nokulawula okunamandla kokudla kudingeka.